BUKA: U-DJ Sbu ezishaya isifuba ngokuthi iMofaya isizodayiswa esitolo esikhulu kuleli | News24
BUKA: U-DJ Sbu ezishaya isifuba ngokuthi iMofaya isizodayiswa esitolo esikhulu kuleli
Johannesburg – Usaziwayo wakuleli ongumsakazi nosomabhizinisi, uDJ Sbu, usememezele ku-Instagram ukuthi isiphuzo sakhe esinikeza umfutho (energy drink), iMofaya, isizotholakala manje ezitolo zakwa-Pick n Pay ezweni lonke.
Esikhathini esingaphambilini lesi siphuzo besitholakala ezitolo zakwa-Pick n Pay eziseGauteng kuphela.
OLUNYE UDABA:Usebuye ngezinkani uDJ nesiphuzo sakhe
Esiqeshaneni se-video, uSbu uthe: “Ezweni lonke, izotholakala maduzane iMofaya. Kule nyanga kanye nangenyanga edlule bekumele siqale ngo-Pick n Pay abaseGauteng.
"I-KZN izolandela, eMpumalanga, eNorth West siyeza, e-Eastern Cape, eWestern Cape, eKZN siyeza. IMofaya iyatholakala ePick n Pay. Sithanda ukuthi siyabonga Pick n Pay ngokuba yinkampani yokuqala ukuhola ngesibonelo futhi weseke uguquko, siyabonga kakhulu.”
Zibonele le-video ngezansi: